Indawo Yokusebenzela IDava yenzelwe amahhovisi asendaweni evulekile, izikole namanyuvesi lapho izigaba zomsebenzi ezithulile nezigxile zibalulekile. Amamojula anciphisa ukuphazamiseka kwe-acoustic nokubukwayo. Ngenxa yokubukeka kwayo okungxantathu, ifenisha iyindawo esebenza kahle futhi ivumela izinketho eziningi zokuhlela. Izinto ze-Dava yi-WPC noboya bezizwa, zombili zazo zingenziwa izinto eziphilayo. Isistimu ye-plug-in ilungisa izindonga zombili ku-tabletop futhi igcizelela ukulula ekukhiqizeni nasekuphatheni.
Sonto 11 Julayi 2021
Ifenisha Smart Sawubona Wood udale umugqa wefenisha yangaphandle enemisebenzi emihle yezikhala zomphakathi. Bacabanga kabusha uhlobo lwefenisha yomphakathi, baklama ukufakwa okubandakanya ukubamba iqhaza nokusebenza, okubandakanya uhlelo lokukhanyisa nezitolo ze-USB, ezazidinga ukuhlanganiswa kwamapaneli namabhethri elanga. Inyoka iyisakhiwo esihlelayo; izinto zalo ziyahlukahluka ukuze zilingane nendawo enikeziwe. I-Fluid Cube iyunithi engaguquki enengilazi engaphezulu enamaseli elanga. Lesi situdiyo sikholelwa ukuthi inhloso yokuklama ukuguqula izindatshana zokusetshenziswa kwansuku zonke zibe izinto ezithandekayo.
Lwesihlanu 9 Julayi 2021
Itafula Lokudlela I-Augusta ichaza itafula lokudlela lasendulo. Ukumelela izizukulwane eziphambi kwethu, ukwakheka kubonakala kukhula kusuka empandeni engabonakali. Imilenze yetafula ibhekiswe kulo mqondo ojwayelekile, ifinyelela phezulu ekubambeni ithebhulethi efana nencwadi. Ukhuni oluqinile lwe-walnut European lwakhethwa ngezincazelo zalo zokuhlakanipha nokukhula. Izinkuni ezivame ukulahlwa abenzi befenisha zisetshenziselwa izinselelo zalo ukusebenza nazo. Izinduku, imifantu, ukuqhaqhazela komoya nezikhukhula ezingafani nalutho zixoxa indaba yokuphila kwesihlahla. Ubunye bokhuni buvumela le ndaba ukuthi iqhubeke ihlala esicucwini sefenisha yomndeni we-heirloom.
Lwesine 8 Julayi 2021
Ukufakelwa Umqondo wokufakelwa kwezimonyo zikaClive uzalwe uhluke. UJonathan akafunanga nje ukudala olunye uhlobo lwezimonyo ngemikhiqizo ejwayelekile. Ukuzimisela ukuhlola ukuzwela okuningi futhi okuncane kakhulu kunalokho akholelwa khona ngokuya ngokunakekelwa komuntu siqu, ubeka inhloso eyodwa eyinhloko. Ibhalansi phakathi komzimba nengqondo. Ngomklamo ophefumulelwe waseHawaii, ukuhlanganiswa kwamaqabunga asezindaweni ezishisayo, ubukhulu bethoni lolwandle, kanye nokuhlangenwe nakho okungaxakile kwamaphakeji kunikeza umuzwa wokuphumula nokuthula. Le nhlanganisela yenza kube nokwenzeka ukuletha okuhlangenwe nakho kwaleyo ndawo ekwakhiweni.
Lwesithathu 7 Julayi 2021
Coca-Cola Tet 2014 Ukufakwa Kwesiphuzo Esithambile Lwesihlanu 22 Okthoba
5 Elemente Ilebula Le Wayini Lwesine 21 Okthoba
Calendar 2014 “Botanical Life” Ikhalenda Lwesithathu 20 Okthoba
Indawo Yokusebenzela Indlu Ifenisha Smart Itafula Lokudlela Ukufakelwa Ihhovisi